Pope Francis oo booqasho ku jooga Morocco - BBC News Somali
Pope Francis oo booqasho ku jooga Morocco
Image caption Boqor Maxamed-ka Lixaad oo Pope Francis soo dhawaynaya
Pope Francis oo booqasho ku jooga dalka Morocco ayaa shacabka dalkaas ugu baaqay in ay dhiiri geliyaan wada-hadallada diimaha ka dhexeeya isla markaana ay maro ku dhegnimada la dagaallamaan.
Waxa madaarka kaga hor tagey Boqor Maxamed ka Lixaad oo baabuur ku geeyey magaalo madaxda Rabaad, halkaas oo Pope-ku khudbad ka jeediyey.
Pope-ku wuxu la kulmi doonaa dadka muhaajiriinta ah iyo hogaamiyeyaasha Muslimiinta, waxaanu sidoo kale wacdi diineed u jeedin doonaa dadka tirada yar ee haysta mad-habka Kaatoliga ee diinta Masiixiyadda ee dalkaas ku nool.
Vatican-ka ayaa u arka booqashada Pope-ka mid lagu sii wadayo booqashadii taariikhiga ahayd ee uu bishii hore ku tagay Imaaradka Carabta.
Pope Francis oo la hadlayey kumanaan qof oo isku soo baxay ayaa waxa uu yidhi "waa muhiim in maro ku dhegnimada laga horyimaaddaa" isla markaana dadka diimaha rumaysani ay "u noolaadaan walaalo oo kale".
Wuxu difaacay "xorriyadda damiirka" iyo sidoo kale "xorriyadda diinta" oo uu ku sheegay in ay yihiin arimo aasaasi u aha sharafta aadamenimada waxaasu sidoo kale sheegay in ay "ma huraan" tahay in la qaado "taaloobo lagu diyaarinayo hogaamiyeyaasha diimeed ee mustaqbalka".
Tan iyo 2015-kii waxa da' yarta reer Morocco ee la duufsaday lagu qiyaasaa1600 kuwaas oo ku biiray kooxaha jihaad alooska ah ee u dagaalamaya kooxda la baxday Dawladda Islaamka.
Boqor Maxamed ayaa sheegay in sida ugu muhiimsan ee duufsiga dhalin yarada loola dagaalami karaa tahay in kor loo qaado waxbarashada diinta.
Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dadka aaminsan mad-habta Kaatoliga ee tiradooda lagu qiyaaso 1.3 bilyan oo qof ayaa waxa dalkaa ku marti qaaday Boqorka, waxaanay saraakiisha Morocco sheegeen in ay casuumaddaasi qayb ka tahay "kobcinta wada hadallada diimaha".
Sharciga Morocco wuxu dammaanad qaadaa xorriyadda cibaadada. Laakiin Masiixiyiinta oo bulshada dalkaas ee tiradeedu tahay 33 ka milyan ka ah wax ka yar 1% ayaa sheega in aan loo ogolayn in ay si shaaca u cibaadaystaan isla markaana takoor ay mutaan.
Sida uu xeerka ciqaabta ee dalkaasi dhigayo qofka isku daya inuu qof Muslim ah ka dhigo Masiixi wuxu mutaysanayaa xadhig.
Iyadoo ay Yurub iyo Woqooyiga Ameerika hangool iskaga hayaan dadka soo galootiga ah, ayaa Pope-ku waxa uu sidoo kale booqan doonaa iskuul ay wax ku bartaan Imaamyada iyo dadka muhaajiriinta ah oo ay gacanta ku hayso hay'ad khayri ah oo Kaatolig ahi.